Magnet ကားကိုင်ဆောင်သူထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ အကြား
Car အတွက် Cell Phone Holder သည်စစ်တပ်မှကြံ့ခိုင်မှုကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းသည်သာမန်လူများထက် 10 x ထက် ပို. ခံနေရသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏ကား Dash (သို့) ကားရှေ့တွင်ကပ်ထားနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်ကအိမ်မှာသုံးနိုင်တယ်, သင်လေ့လာနေသည့်အခါ, ဗွီဒီယို, လုံးဝလက် - အခမဲ့နှင့်အမြင်များ - ချိန်ညှိ။
【 10 "Selfie လက်စွပ်မီး0င်ပါ0င်သည့်ထူးခြားသောပေါင်းစည်းထားသောဒီဇိုင်း, သေးငယ်သောအပိုင်းအစဒီဇိုင်း, အပြည့်အဝဆန့ ်. 2.9 x 10 x 10 လက်မ, အပြည့်အဝဆန့ ်. အပြည့်အဝဆန့ ်. , ၎င်းကိုသင်၏သက်ဆိုင်ရာအရွယ်အစားကျောပိုးအိတ်နှင့်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာထဲသို့ထည့်ရန်လွယ်ကူပြီးသင်လိုချင်သည့်နေရာကိုသယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။【ထူးချွန်သော Light Light Ring 】 Outer / Inner အချင်း - 10.0 "/ 8.3", 160 PCs အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော LED LABLED LABDADED LABDED LABDADED LABDED LAKE), 24w, အရောင်အပူချိန်: 3500k-6000K, တောက်ပ, ကြာရှည်ခံသူ,【ချိန်ညှိနိုင်သောအရောင်& Brighnness 】အရောင်တောက်တောက် (3) ခုပါ0င်သောအဖြူရောင် / နွေးထွေးသောအဖြူ / ပူနွေးသောအဝါရောင်သည် 1% မှ 100% မှ 100% အထိရှိသည်။